TOMRA Food... Vahaolana mahomby ho an'ny tsena Rosiana - gazety "Potato System".
Tena vaovao Vaovaon'ny orinasa
в Vaovaon'ny orinasa, Tekinika / teknolojia
Resadresaka nifanaovana tamina mpitantana ny varotra isam-paritra TOMRA Food in Russia by Yana Makshanova.
Inona no teknolojia sy fitaovana vaovao nampidirin'ny orinasa tamin'ny tsena Rosiana nanomboka tamin'ny taona 2019?
Tamin'ny herintaona TOMRA Food nampiditra serivisy rahona TOMRA Insight. TOMRA Ny Insight dia manova ireo mpamaritra sakafo optika TOMRA fitaovana mifandray izay miteraka angona sarobidy momba ny workflow. Ny angon-drakitra dia voangona ao anatin'ny fotoana tena izy ary voatahiry tsara ao amin'ny rahona ary azo jerena na aiza na aiza amin'ny alàlan'ny desktop sy ny fitaovana finday. Izany dia mamadika ny fanasokajiana avy amin'ny asa mahazatra ho fitaovana fitantanana stratejika.
Iza amin'ireo sorters no malaza indrindra amin'ny mpanjifa Rosiana?
Ny mpanala dia malaza indrindra amin'ny mpanjifa Rosiana. TOMRA 3a ary TOMRA 5B. FIARAKODIA TOMRA 3A dia lasa tena lafo vidy indrindra, nahazo laza be teo amin'ireo mpamboly ovy eran'izao tontolo izao. Sorters TOMRA Ny 5B dia lasa vahaolana manara-penitra ho an'ny voanjo, katsaka, ary ny maro hafa ho an'ny orinasa mikasa ny hanatsara ny fahombiazan'ny fizotrany.
Ahoana no fiantraikan'ny coronavirus amin'ny varotra?
Tao anatin'ny roa taona lasa, dia nahatsapa fitomboana lehibe ny fahalianana amin'ny vahaolanay izahay. Izany dia noho ny areti-mifindra, izany hoe ny fameperana ny asan'ny mpiasa amin'ny orinasa sakafo. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny vahaolana fanasokajiana mandeha ho azy dia toa fomba ivoahana voajanahary sy lojika.
TOMRA 3A. Inona no fihetsiky ny mpamokatra Rosiana amin'izany?
Sorter TOMRA Ny 3A dia manome ny tantsaha izay tena ilainy: vokatra avo lenta, fanalana ny fako rehetra, fanesorana ny ravinkazo maitso, fikarakarana vokatra malefaka, fampitomboana ny fahatokisana sy ny faharetana amin'ny asa, ny fampiasana mora sy ny fivezivezena, ny fanangonana angon-drakitra bebe kokoa ary ny antontan'isa amin'ny antsipiriany.TOMRA 3A - ozinina fanasokajiana sensor natao hiasa amin'ny tubers vao nojinjaina. Ireo milina ireo dia matetika apetraka eo amin'ny fidirana amin'ny trano fitehirizana ary manao fanadiovana farany rehefa avy mandalo ny ovy vao nojinjaina amin'ny alàlan'ny fanasokajiana mekanika sy fanasarahana ny tany.
Inona no mampiavaka ny fiara? Misy analogues ve? Inona no maha samy hafa azy ireo ity fiara ity?
TOMRA Ny 3A dia mampiasa fakan-tsary avo lenta sy fakan-tsarimihetsika akaiky infrarouge; ny milina dia mahay mamantatra ovy maitso, manasaraka ny organika (vokatra) sy inorganic (vahiny) akora, ary manavaka ny tany voarakotry ny tubers amin'ny tany. Miaraka amin'ny fotoana voafetra ao anatin'ny fotoana fijinjana fohy, ity milina ity dia manome vokatra avo lenta, matetika miasa amin'ny trano fitahirizana amin'ny hafainganam-pandeha 100 taonina isan'ora. Ary azo afindra mora foana avy amin'ny fitahirizana mankany amin'ny fitahirizana rehefa ilaina izany.
Tsy misy vahaolana eny an-tsena ankehitriny izay manolotra fampisehoana sy toetra mitovy amin'ny TOMRA 3A.
TOMRA 3A: zavamaniry hanasiana ovy TOMRA Food
Inona no vokany ara-toekarena amin'ny fiara, hafiriana no handoavana ny fampiasam-bola?
Sarotra ny miresaka momba izany mitokana amin'ny famokarana manokana sy ny habetsahan'ny vokatra voahodina. Ary koa, ny sorter TOMRA Ny 3A dia misy amin'ny dikan-teny maromaro miaraka amin'ny bandwidth samihafa. Izany dia ahafahanao misafidy vahaolana tena namboarina mifanaraka amin'ny fahaizan'ny tsipika famokarana manokana, ary manafoana ny overpayment ho an'ny fitaovana tsy ampiasaina.
Heverinao ve fa ny fametrahana TOMRA Food - tsy maintsy manana ho an'ny mpanamboatra matotra?
Optical conveyor fanasokajiana orinasa TOMRA 5B
vahaolana TOMRA Food mamela tsy hanatsara ny kalitao sy ny fiarovana ny sakafo vokatra eo amin`ny fivoahana, fa koa mba hihazonana tsy tapaka ambaratonga ambony. Ho an'ny mpanamboatra matotra rehetra dia zava-dehibe izany - ny fahafahana manangana fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa, ary koa ny fampivoarana ny orinasa amin'ny fomba matotra sy amim-pitandremana.
Ahoana ny fanombanana ny fifaninanana amin'izao fotoana izao, mifototra amin'ny valin'ny covid roa taona?
Nitoetra ho mpiara-miombon'antoka matanjaka sy azo ianteherana ho an'ny mpanjifanay izahay, na dia eo aza ny fandrarana ny dia sy ny fahasahiranana aterak'izany eo amin'ny lafiny serivisy. Noho izany, raha jerena ireo tombontsoa tsy manam-paharoa omenay ny mpanjifanay, dia nahavita nanitatra ny fitarihanay tamin'ireo mpifaninana izahay.
Inona no tanjonao amin'ny faran'ity taona ity ary mety ho ny fiandohan'ny manaraka?
Amin'ny faran'ny taona, mikasa ny hampiseho izahay fa tena matoky tena amin'ny tsena Rosiana. Noho izany, indrindra indrindra, dia miasa amin'ny fampandrosoana ny serivisy an-trano ho an'ny fikojakojana ny fitaovana. Ankoatra izany, mikasa ny hiara-miasa akaiky kokoa amin'ireo mpanjifanay Rosiana izahay.
Miorina amin'ny fitaovana avy amin'ny serivisy mpanao gazety TOMRA Food
Ny orinasa TOMRA Food manambara ny fihodinan'ny sehatry ny orinasa roa
Ny orinasa TOMRA Food manambara ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitry ny fandaminany manokana, izay manomboka izao dia hifantoka amin'ny sehatry ny orinasa roa: sakafo vaovao ...
Ny tantsaha frantsay dia mampiasa vola amin'ny mpamosavy TOMRA Food hitazonana ny fitomboan'ny vokatra azo antoka
Ity no tantaran'ny toeram-pambolena sy fiompiana iray any avaratry France, nolovan'ny raim-pianakaviana tamin'ny zanany lahy tokony ho roapolo taona lasa izay. Nandritra io fotoana io, ny orinasa ...
Ny Farm "Tremonvilliers" dia mampiasa ny fametrahana TOMRA 3A amin'ny fandaminana ovy sy betiravy
Mikaroka kalitao Damien Renard, talen'ny orinasam-pambolena EARL de Tremonvillers, dia nahazo ...
Rostselmash sy Sberbank dia nanangana fandaharanasa fampielezana miaraka ho an'ny fivarotana ny fitaovam-pambolena